Saciid Deni oo dareemaya culeysyo badan iyo kulamo ka dhacay Garowe (Xog) | Caasimada Online
Home Warar Saciid Deni oo dareemaya culeysyo badan iyo kulamo ka dhacay Garowe (Xog)
Saciid Deni oo dareemaya culeysyo badan iyo kulamo ka dhacay Garowe (Xog)
Garowe (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in ilaa xalay kulamo gaar gaar ah ka dhacayeen magaalada Garowe.
Kulamada ayaa u dhaxeeyay wafdiga dowladda Soomaaliya ay u dirtay magaalada Garowe iyo madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland iyo ku xigeenkiisa, waxaana looga hadlayay sidii loo wanaajin lahaa xiriirka u dhaxeyn kara Puntland iyo dowladda Dhexe.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in sidoo kale kulamada ay qeyb ka ahaayeen masuuliyiintii looga guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Garowe, waxaana madaxweynaha cusub ee Puntland durba uu dareemayaa culeesaad siyaasadeed.
Kulamada ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweyne Gaas, kaasi oo si gaar ah ula kulmay Saciid Cabdullaahi Deni, isaga oo kala hadlayay sidii uu mar walbaa u adkeyn lahaa horumarka Puntland.
Madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ayaa culeesaadka uu durba dareemayo waxaa kamid ah in dowladda Soomaaliya ay dooneyso in xiriir wanaagsan uu la yeesho, halka qaar kamid ah madaxdii laga guuleystay ay doonayaan in sidii C/Welli Gaas uu ula macaamilo dowladda Soomaaliya.
Dadka falanqeeeya siyaasadda Gudaha ayaa sheegaya in Madaxweyne Deni uu ka sii go’aan adkaan karo C/Welli Gaas labo arin darteed, waxaana tan koowaad lagu sheegaa xiriir weyn ee kala dhaxeeyo DAMJADIID iyo inuusan soo dhaweyn ka heysan markii hore dowladda Dhexe.